दान, जनचेतना र शिक्षा अभियानमा चिकित्सक दम्पत्ती – उज्यालो खबर
दान, जनचेतना र शिक्षा अभियानमा चिकित्सक दम्पत्ती
सोमबार, आषाढ २८, २०७८ | २०:०५:५४ |
चितवन । यहाँका दन्त चिकित्सक दम्पत्ति दान, जनचेतना र शिक्षा अभियानमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ । प्राकृतिक विपत्तीमा परेका बेला सहयोगदेखि दन्त रोग नियन्त्रणका लागि जनचेतना, गरिब र विपन्न परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा उहाँहरुले निरन्तर सहयोग गरिरहनु भएको हो । भरतपुर, नारायणगढ र टाँडी बजारमा रहेको साईराम डेन्टल केयरका सञ्चालकद्वय डा.अजय न्यौपाने र डा. सरु थापा न्यौपाने आफ्नो कमाईको २० प्रतिशत हाराहारी दानमा नै खर्चिनु हुन्छ ।
दन्त चिकित्सामा नाम चलेको यो जोडिले दन्त पर्यटनमा पनि अभियान चलाउँदै आएको छ । नेपाल सरकारको १० औं तहका चिकित्सक डा.अजय यहाँको भरतपुर अस्पतालमा दन्त रोग विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । दुई वर्ष बकुलहर रत्ननगर अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट भईसक्नु भएका उहाँको जोडि चितवन, नवलपरासी, धादिङ र गोरखाका गाउँगाउँसम्म पुगेर निःशुल्क सेवा दिएको छ । यो जोडिले अहिलेसम्म २५ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष परीक्षण गराएर निःशुल्क रुपमा औषधिसँगै ब्रस, पेष्ट वितरण गरिसकेको छ । आफ्नो क्लिनिकमा बिरामी भरिभराउ हुँदै गर्दा यो संख्या घटाउन जनचेतना जरुरी रहेको डा. अजय बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “बालिबालिकाको पाठ्यक्रममा दाँतको सुरक्षा सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्छ ।” यो जोडिले शिविरहरुमा दाँत निकाल्ने, भर्ने, सफा गर्ने, निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने र जनचेतना जगाउने गर्दै आएको छ । जिल्लाका पिछडिएको समुदायमा पुगेर आफ्नै खर्चमा निःशुल्क शिविर गर्ने गरेको उहाँहरुको भनाई छ । गाउँगाउँमा शिविरसँगै यो दम्पत्तीले विपत्तिका बेला असहायहरुलाई साथ दिने गरेको छ । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ सामुदायका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री पनि उहाँहरुले समय समयमा वितरण गर्दै आउनु भएको छ । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प जाँदै गर्दा उहाँहरुले त्यही पुगेर लत्ता कपडा, खाद्यान्न, जस्तापाता लगायतका सामग्री वितरण गर्नुभएको थियो ।
देवघाटमा रहेका बृद्धबृद्धालाई निःशुल्क दन्त परीक्षण गर्ने, औषधि, लत्ता कपडा वितरणा गर्ने उहाँहरुको नियमित कामभित्र पर्दछन् । बाढी पहिरोका बेला सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर सहयोग गर्ने गरेको डा. अजय बताउनुहुन्छ । त्यसो त पछिल्ला समय आएका दन्त चिकित्सकहरुलाई प्रविधि र सीप हस्तान्तरण गर्न आफ्नै खर्चमा यो दम्पत्तीले गोष्ठी गर्न थालेको छ । वर्षमा दुई वटा गोष्ठी गर्ने योजना रहे पनि कोभिडका कारण हालसम्म तीन वटा मात्रै हुन सकेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ “हामीले ८० जना हाराहारी दन्त चिकित्सकलाई यहाँ बोलाएर दुईदेखि तीन दिनको आवासीय निःशुल्क कार्यक्रम गर्दै आएका छौं ।” उहाँहरुको आफ्नै खर्चमा यी कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । कोरोना घटेसँगै वर्षमा दुई वटा यस्ता कार्यक्रम गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले प्रविधि हस्तान्तरणमा ठूलो टेवा पुग्ने उहाँहरुको बुझाई छ । विदेशमा छरिएर रहेका दन्त चिकित्सकलाई नेपाल बोलाउने डेन्टल प्रोजेक्ट नेपाल समेत उहाँहरुले शुरु गर्नुभएको छ । १५ दिने यस कार्यक्रममा विदेशी दन्त चिकित्सक यहाँ आएर उपचारका बारेमा छलफल परामर्शसँगै यहाँका पर्यटकीय क्षेत्र घुम्ने गर्दछन् । सन् २०१५ बाट उहाँहरुले यो अभियान शुरु गर्नुभएको हो । कम्तीमा १५ र बढीमा २५ जनासम्म चिकित्सक आउने गरेकोमा पछिल्ला वर्षहरुमा कोभिडबाट प्रभावित बनेको छ । घुमेर फर्किदै गर्दा उनीहरु हर्षित भएको न्यौपाने दम्पत्ति बताउनुहुन्छ । प्रविधि साटासाट गरेर उपचारमा सहजता आएको उहाँहरुको बुझाई छ । डेन्टल टुरिजम अन्तर्गत रत्ननगर नगरपालिका र क्षेत्रीय होटल संघसँग मिलेर साईराम डेन्टलले अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम समेत गरेको थियो । विदेशमा दाँतको उपचार महंगो हुने हुँदा युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतमा देशमा रहेका नेपाली उपचार गर्न यहाँ आउने गर्दछन् । यस अभियानमा विदेशीलाई समेत जोड्ने जमर्काे यो दम्पत्तिले गरेको छ ।
दाँतको उपचार निकै महंगो हुने भए पनि अरु देशको तुलनामा नेपालमा ८० प्रतिशत सस्तो हुने गरेको पाईन्छ । थाईल्याण्ड, कम्बोडिया, भियतनाम जस्ता देशले डेन्टल टुरिजममा राम्रो प्रगति गरेको भन्दै डा. अजयले भन्नुभयो “नेपालमा पनि यो निकै राम्रो गर्न सकिन्छ । यहाँको भविष्य उज्ज्वल छ ।” नेपाल शान्त देश, अतिथि सत्कारमा उत्कृष्ट, दाँतको उपचारमा दक्ष जनशक्ति, विदेशकै उपकरणको प्रयोग भए पनि खर्च कम लाग्ने गरेको छ । दन्त चिकित्सा क्षेत्रलाई उत्कृष्ट बनाउन यो दम्पत्तिले पढ्दै गरेका चिकित्सक र भर्खरै कर्ममा लागेकाहरुलाई विभिन्न ढंगले सहयोग पनि गर्दै आएको छ । गत वर्षको कोभिडताका रु.१२ लाख उनीहरुका लागि यो दम्पत्तिले खर्च गरेको थियो । डा. सरुका अनुसार पढ्दै गरेका विद्यार्थी र भर्खरै काम थालेका दन्त चिकित्सकलाई रु.१० लाख र नेपाल डेन्टल एसोसिएसनलाई रु.२ लाख सहयोग गरिएको हो । यस वर्ष अक्सिजन, माक्स, पिपिई जस्ता स्वास्थ्य सामग्री सरकारी अस्पताल, पत्रकार, सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । रु.६ लाखभन्दा बढीको सामग्री किनेर वितरण गरेको सरुले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुमार्फत् जनचेतना जगाउन रत्ननगर नगरपालिकासँग मिलेर तालिम गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो “दाँतको उपचार गर्नै नपर्ने गरी जनचेतना जगाउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ ।” कसरी बिरामी घटाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुवेको यो जोडी मध्येकी सरु भन्नुहुन्छ “बच्चाको औषधि गुलियो हुने खाएपछि कुल्ला गर्न नभनिएकै कारण धेरै बालबालिकाको दाँत बिग्रिएको छ ।” बाल रोग विशेषज्ञहरुसँग यस विषयमा अन्तक्र्रिया गर्ने तयारीमा उहाँहरु हुनुहुन्छ । सरुले भन्नुभयो “दाँतमा समस्या भएको बच्चा अन्य बच्चाको तुलनामा मानसिक र शारीरिक विकासमा पछि पर्छ ।” नेपालमा रोगको रोकथाम नै गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले उपचार गर्न आवश्यक संख्यामा चिकित्सक नभएको, औजार उपकरण खरिद गर्न आवश्यक बजेट नपुग्ने र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो खर्च हुने हुँदा गाउँगाउँसम्म यो सेवा पुग्न सकेको छैन । उपचार महंगो तर रोकथाम अति सस्तो हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो “जनचेतना जगाएर रोकथाम गर्न सकिन्छ, तर उपचार महंगो छ ।” उहाँहरुसँग निकट सम्बन्ध राख्नुहुने बरिष्ठ पत्रकार दीपक आचार्य सामाजिक सेवामा युवा उमेरमा यो चिकित्सक दम्पत्तिले गरेको योगदान उदाहरणीय रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ, त्यहाँ सहयोग लिएर यो दम्पत्ति पुग्ने गरेको छ ।” रोग लाग्न नदिनका लागि जुन अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यसलाई सबैको साथ र सहयोग चाहिने उहाँको भनाई छ । ट्रष्ट बनाएर यस्तो सहयोग गर्न आफूले सुझाव दिएको आचार्यको भनाई छ । बि.सं. २०६१ सालदेखि जिल्लामा दन्तरोगको उपचार गर्दै आएको यो जोडिले बंगलादेशबाट ब्याचलर अफ डेन्टल सर्जरी (बिडिएस) गरेर नेपाल फर्किएको हो । डा.अजय बिडिएसमा गोल्डमेडलिष्ट हुनुहुन्छ । नेपाल आए लगत्तै कर्मथलो चितवन बनाएर उहाँहरु सेवामा जुट्नु भएको हो । सँगै अध्ययन गरेका अजय र सरुले नेपाल आएर विवाह गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्नुभएको हो । मूल घर काठमाण्डौ भएका यो जोडी अहिले भरतपुरको स्थायी बसिन्दा हुनुहुन्छ ।रासस
कारितास नेपाल गैँडाकोटद्धारा ६ लाख बढीको स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
चितवनकी सुजिता भण्डारीको देवघाटमा दाहसंस्कार
चितवनमा माधव नेपालको पुत्ला दहन !
ट्यांकरको ठक्कर बाट मोटरसाईकलमा सवार युवती गम्भिर घाईते